Vaovao - Ny sahan'ny fampiasana film stretch
Saran'ny fampiasana film stretch
1. Fonosana voaisy tombo-kase: ity karazana fonosana ity dia mitovy amin'ny sarimihetsika mihodinkodinamihena-filmfonosana.Ny sarimihetsika dia mametaka ny lovia manodidina ny lovia, ary avy eo ny hafanana mafana roa misintona tombo-kase ny sarimihetsika miaraka amin'ny tendrony roa.Ity no fampiasana voalohany indrindra amin'ny film stretch, ary misy fomba famonosana bebe kokoa novolavolaina.
2.Full-width fonosana: ity karazana fonosana dia mitaky nyhoronan-tsarymalalaka ampy hanarona ny lovia.Ny endriky ny lovia dia tsy tapaka, noho izany dia mety ny maninjitra ny sarimihetsika.Ny hatevin'ny sarimihetsika dia 17 ~ 35μm.
3. Famonosana asa tanana: ity fonosana ity no karazana fonon-tsarimihetsika tsotra indrindra, sarimihetsika apetraka eo amin'ny vata na amin'ny tanana, amin'ny alàlan'ny lovia mihodina na sarimihetsika manodidina ny lovia.Ampiasaina indrindra amin'ny fonosana lovia tsara simba avy amin'ny fonosana scratch, ary fonosana lovia ankapobeny.Ny hafainganam-pandehan'ny fonosana dia miadana ary ny hatevin'ny sarimihetsika mety dia 15 ~ 20μm.
4. Film mihinjitrafonosana milina manodidina: ity no iray amin'ireo fomba famonosana mekanika miely patrana indrindra, amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny lovia na sarimihetsika manodidina ny fihodinan'ny lovia, ny sarimihetsika miorina amin'ny bracket dia afaka miakatra sy midina.Ity karazana fonosana ity dia mety ho lehibe tokoa, eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 18 takelaka isan'ora.Ny hatevin'ny sarimihetsika mety dia manodidina ny 15 ~ 25μm.
5. Fonosana mekanika mitsivalana: tsy mitovy amin'ny fonosana hafa, amin'ny sarimihetsika manodidina ny lahatsoratra, mety amin'ny fonosana entana lava, toy ny karipetra, board, fiberboard, fitaovana miendrika manokana, sns.
6. Famonosana fantsona taratasy: Ity no iray amin'ireo fampiasana vaovao indrindra amin'ny sarimihetsika mihinjitra, izay tsara lavitra noho ny famonosana ireo fantsona taratasy tranainy amin'ny sarimihetsika voafono.Ny hatevin'ny sarimihetsika mety dia 30 ~ 120μm.
7. Fonosana entana kely
Ity no fomba fonosana farany amin'ny sarimihetsika mihinjitra, izay tsy vitan'ny hoe mampihena ny vidin'ny data, fa mampihena ny toerana fitahirizana ny lovia.Any amin'ny firenen-kafa, ity fonosana ity dia nampidirina tamin'ny 1984, herintaona taty aoriana dia maro ny fonosana toy izany eny an-tsena, ary ity fomba famonosana ity dia manana hery tsy manam-petra.Ny hatevin'ny sarimihetsika mety dia 15-30 μm.
8. Famonosana fantsona sy tariby
Ity dia fonosana ampiasaina amin'ny faritra manokana toy ny fitaovana famonosana napetraka amin'ny faran'ny tsipika famokarana, sarimihetsika mihinjitra mavitrika tanteraka dia afaka manolo ny kasety hamatotra ny angon-drakitra, fa koa hitazonana ny vokatra.Ny hateviny mety dia 15 ~ 30μm.